Global Voices teny Malagasy » Thailandey mpitsara nitifi-tena tao amin’ny efi-pitsarana taorian’ny filazany fa misy fitsabahana ara-politika amin’ny famoahana didim-pitsarana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Oktobra 2019 5:39 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Miaramila ao Yala, Thailandy. Sary sy fanazavana avy amin'i Tarik Abdel-Monem. Loharano: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Taorian'ny fanafahana madiodio olona dimy voampanga ho namono olona tao atsimon'i Thailandy tamin'ny 4 Oktobra 2019, namaky  fanambaràna iray tao anatin'ny lapan'ny fitsaram-paritany Yala ho fisian'ny fitsabahana ara-politika sy ara-itsarana ny Mpitsara Khanakorn Pianchana. Taorian'izany izy nandray basy ary nitifitra ny tenany teo amin'ny tratrany. Lasa toe-draharaham-pirenena  ny zava-nitranga ary nahatonga ny maro hanontany ny amin'ny fahaleovantena sy ny fitokisana ny fitsarana. Nahazaka ny ratra nahazo azy ny Mpitsara Khanakorn ary efa nimpody tsikelikely ny fahasalamany.
Namoaka fanambaràna  ahitana pejy 25 manazava ny hetsika nataony ny Mpitsara Khanakorn. Nanoratra i Khanakorn fa nobaikon'ny lehibeny izy hanameloka ireo voampanga na dia tsy ampy aza ny porofo fitanana sy fanamelohana. Nivoaka tao amin'ny Facebook izany tamin'ny andro nisian'ny tifitra saingy nanjavona vetivety.
Tamin'ny taona 2018, Nisambotra olona dimy ahiahiana ho nanao famonoana olona, fikambanana miafina, firaisana tsikombakomba ary heloka mifandraika amin'ny basy ny manampahefana tao atsimon'i Thailandy. Raha meloka ireo voampanga ireo dia mety ampiharina aminy ny famonoana ho faty.
Efa an-taonany maro izao no nitrena  fihenjanana ny tao Thailandy atsimo noho ny fisian'ireo vondrona mampijoro ny zon'izy ireo hizaka tena. Ahitana miozolomana betsaka izany faritra izany ao amin'ity firenena betsaka bodista ity. Nampihatra ny fepetra amin'ny tany misy hotakotaka ny governemanta izay midika fa afa-misambotra olona tsy misy taratasy fampisamborana ary afa-mihazona azy ireny ao anatin'ny fotoana voafetra ny tafi-panjakana.
Mino ny Mpitsara Khanakorn fa tsy mety heverina ho ara-dalàna ny porofo azo nandritra ny famotorana sy ny fihazonana ao anatin'ny fepetran'ny hotakotaka napetraky ny governemanta.
Tao amin'ny fanambaràna nataony izy nandrisika ny mpanao lalàna hanitsy ny lalànan'ny Lapan'ny Fitsarana mba handraràna ny fanovana ny didy mialoha ny hamakiana azy ireny. Amin'izao fotoana, afa-mamaky mialoha ny didin'ny mpitsara eny fa na dia mialoha ny hanambaràna azy ireny ao amin'ny fotoam-pitsarana aza ireo manampahefana ambony kokoa ao amin'ny rafi-pitsarana. Afa-manery ny eo ambany fahefany ireo mpitsara zokiny ireo hanoratra indray (hanova) ny fanapaha-keviny voalohany. Nangatahan'ny Mpitsara Khanakorn tamin'ny governemanta ihany koa ny ‘hanomezana ara-drariny ny vola (karama)’ ho an'ny mpitsara.
Avereno amin'ny mpitsara ny didim-pitsarana. Avereno amin'ny vahoaka ny rariny.
Mety ho maivana tahaka ny volomborona ny fanambaràna ataoko, saingy tokony ho mivaingana tahaka ny tendrombohitra ny fon'ny mpitsara.
Natahotra ny Mpitsara Khanakorn fa hiteraka famotorana sy hanimba ny asany ny hanadiovana ireo voampanga. Saingy ao anatin'izany fotoana izany ihany, tsy afa-manameloka ny voampanga noho ny tsy fahampian'ny porofo izy. Noho ny tsy fahitany izay ho lalan-kombany dia nanapa-kevitra izy ny hitifi-tena.
Nahazo ny fifantohan'ny ao amin'ny firenena haingana ny fitifirana. Ny sasany amin'ireo mpanohana ny miaramila miampanga ilay mpitsara ho manangana tantara an-tsehatra hamelomana fifandirana ara-politika. Ny sasany indray mino fa ao anatin'ny tsikombakomba hanampiana ny mpanohitra mba hitsofohana ao amin'ny (rafitra) mpitsara izany.
Midrikina  ny manampahefanan'ny Lapan'ny Fitsarana fa ao anatin'ny rariny sy mahaleotena ny rafi-pitsarana ary nolazainy fa ny trangam-pitifirantena nataon'ny Mpitsara Khanakorn dia mety ho tondro fa miatrika ‘olana manokana maro dia maro’ izy.
Tahaka izany ihany koa, nanangana famotorana amin'ny filazana natsangan'ny mpitsara mba hiarovana ny fitokisana ny rafi-pitsarana ny governemanta.
Atiya Achakulwisut, mpanao matoandahatsoratra ho an'ny gazety Bangkok Post namehy  ny setriny avy amin'ny Thailandey maro:
Ny fanesorany ny ainy mba hahazoana fifantohana amin'izay inoany no midika faharisarisàna mikiky ny rafi-pitsarana ary manafintohina satria mankaloiloy, indrindra rehefa heverina ny halehiben'ny fitaintainana mahatonga ilay mpitsara ho tonga any amin'ny fanaovana sorona ny tenany.
Avoitran'ny  matoambaovaon'ny Bangkok Post ny fahasarotana ao amin'ny tontolo politika ao Thailandy atsimo:
… fa raharaha tena manahirana dia manahirana tokoa izy ity izay mety manamora ny fanasaziana olona tsy manantsiny na lasa sorona. Raha izay no mitranga, hiteraka lonilony amin'ny ankamaroan'ny Miozolomana izany tsy rariny izany ary hanelingelina ny fikasan'ny fanjakana hitondra fandriampahalemana ao amin'ny faritra misy hotakotaka.
Cross-Cultural Foundation, FTMF iray miorina ao amin'ny faritra atsimon'i Thailandy ao no manana zavatra tokony hotanterahana  :
Afindrao toerana avy hatrany ireo olona rehetra tafiditra nahatonga izao raharaha Mpitsara Khanakorn izay manahirana izao. Izany baiko izany ho hiantoka fa ho ara-drariny ho an'ny rehetra ny famotorana manaraka, tsy hisy tsindry avy ao anatiny ary tokony ahitana mpanolotsaina ivelan'ny faritra ireo ekipa hanao ny famotorana. Tokony hitondra fepetram-pisorohana izay hiantoka ny tsy isian'ny fitsabahana ao amin'ny fahaleovantenan'ny rafi-pitsarana ihany koa ny zavatra hita ao amin'ny famotorana.
Mamerimberina  ny filàna hisian'ny fanavaozana ara-politika sy ara-pitsarana ao Thailandy i Frederick Rawski, talen'ny Vaomieran'ny Mpitsara Iraisampirenena ao Azia:
Asehon'ity toe-javatra mampalahelo ity indray ny filàna fanavaozana amin'ny fampiharana ny lalàna ary indrindra ny fahaleovantenan'ny rafi-pitsarana ao Thailandy.
Asehon'ity raharaha ity indray fa manavesatra ny tsindry atao amin'ny mpitsara ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny hitsivolana mihatra amin'ny hotakotaka ao amin'ny faritra atsimon'i Thailandy
Ny antony voalohany mahatonga ny famonoantena dia avy amin'ny fahakiviana tanteraka tsy voatsabo. Azo tsaboina ny fahakiviana ary azo sorohina ny famonoantena. Afa-mahazo fanohanana tsy ambara manoloana ireo manampanirina ny hamono tena sy ireo tratran'ny krizy ara-pihetsehampo ianao. Tsidiho ny Befrienders.org  hahitanao antso fisorohana famonoantena ao amin'ny firenena misy anao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/15/143985/
 zavatra tokony hotanterahana: https://voicefromthais.wordpress.com/2019/10/07/public-statement-transfer-all-persons-related-to-judge-khanakorn-pianchanas-public-statement-from-their-current-posts-and-launch-a-comprehensive-probe-into-alleged-interference-with-fair-tri/?fbclid=IwAR0P2dUTgex-oeqGWP3ASf87n2kmzmSQHCAp7efp8vhuDsVFGYM-FEe6JwA